Abalandeli yisithako esizoyizayo enkundleni | Bayede News
Home/ Ezemidlalo/Abalandeli yisithako esizoyizayo enkundleni
INDLELA ompetha be-Absa Premiership iMamelodi Sundowns abadlale kahle ngayo ngeledlule lapho kade bebhekene nezingqungqulu zase-Egypt i-Al Ahly SC emdlalweni weCAF Champions League esigabeni samaQuarter- Final emlenzeni wokuqala ingihlabe umxhwele.
ISundowns kulo mdlalo obubanjelwe eLucas Moripe Stadium, inqobe ngamagoli amahlanu eqandeni abadlali abavalela phakathi amagoli uThemba Zwane osefomini eyisimanga, uWayne Arendse, uRicardo Nascimento, uGiston Sirino noPhakamani Mahlambi.
Yize lenze kahle leli qembu elicijwa uPitso “Jingles” Mosimane laphakamisa ifulegi lakuleli, kodwa engibona kuyikho okwenze linqobe lo mdlalo ukuphuma kwabalandeli ngobuningi babo bagcwale inkundla
Isinqumo sabaphathi sokuthi bafake abalandeli mahhala sidinga ukushayelwa ihlombe ngoba inkulu indima esiyilimile.
Umuntu obebuka lo mdlalo ubebona umbala ophuzu ugcwele inkundla, ukukhombisa ukuthi abalandeli baseNingizimu Afrika bebephume ngobuningi babo ukuzoseka leli qembu ekuyilo eseliyithemba kuleli.
Kungekhona ukuthi ukubhala kwami leNgosi ngincoma iSundowns, kodwa ngincoma ubumqoka babalandeli enkundleni.
Kule sizini ku-Absa Premiership amaqembu amaningi ashawa luvalo uma kumele ebhekene neBlack Leopards enkundleni yayo iThohoyandou Stadium, eLimpopo. Yize nayo iLeopards idlala kahle kodwa okwenza yenze ezibukwayo kakhulu ukujabulisa abalandeli bayo abasuka bebulala inyoka.
Kule nkundla leli qembu eliteketiswa ngokuthi iLidoda Duvha selidlale imidlalo eli-10 ekhaya lihlulwe kabili ladlala ngokulingana kwemithathu lanqoba emihlanu. Laphinde lawashisa i-Orlando Pirates ijezi emdlalweni weNedbank Cup, esigabeni seLast 32.
Kuzokhumbuleka ukuthi eminyakeni edlule bekuke kubenzima emaqenjini amaningi ukuthi abuye enqobile ebhekene neBloemfontein Celtic enkundleni yayo ebiyaziwa ngokuthi iSeisa Ramabodu, kodwa manje esiyiDr Petrus Molemela Stadium.
NgoLwesihlanu olwedlule emdlalweni weMaritzburg United neCeltic obuseHarry Gwala Stadium, abalandeli bebeyigcwalise phama inkundla okusize iqembu ekade lisekhaya ligcina linqoba ngamagoli amabili kwelilodwa.
NangeSonto emdlalweni weqembu lakuleli labesifazane iBanyana Banyana kade ibhekene neJamaica emdlalweni wobungani eMoses Mabhida Stadium, eThekwini yize inganqobanga kodwa idlale kahle kakhulu njengoba ibingafuni ukuphoxa izinkumbi zabalandeli. Phesheya kwezilwandle iqembu elingomakoti ku- English Premier League (EPL) iWolverhampton Wanderers ligila izimanga ekhaya lapho okuyikhona lisekwa kakhulu. Kule midlalo libhaxabule izingqungqulu zakule ligi, lahlula kabili iManchester United koweligi nakoweFA Cup, lishaye neLiverpool FC kanye neChelsea FC.
ISundowns yize inqobe ngamagoli amahlanu kodwa kubukeka izothwala kanzima eCairo njengoba inkundla izobe ibomvu klubhu abalandeli begqoke imifaniswano ye-Al Ahly SC. Abalandeli baleli qembu bazokwenza ngakho konke ukuthi amaBrazillians ayabuthwala ubunzima.
Emasontweni amabili edlule iqembu lakuleli lesizwe iBafana Bafana linqobe kunzima emdlalweni walo wokuhlungela ukungena ku-African Cup of Nations (AFCON) ezobanjelwa e-Egypt ngoNhlangulana nonyaka. Iibhekene neLibya yize ligcine linqobe ngamagoli amabili kwelilodwa, kodwa abadlali bakhale ngenhlamba ababethukwa ngayo.
Ngalokho babengadliwa, kodwa baqinisela.